﻿ ‘सिमित बजेटमा असिमित माग पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ’
आइतबार १३, माघ २०७५
इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ५ का वडाध्यक्ष कल्याण कार्की वडामा सम्भावना देख्ने वडाध्यक्ष हुन् । वडावासीको कामको लागि निकै सक्रिय उनी वडाध्यक्ष भएसँगै वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोलगायतका पूर्वाधारको विकासको लागि उनी लागि परेका छन् । उनीसँग वडाको विकासको बारेमा न्युजलयका लागि सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी :
आजभोली २०७५/७६ को बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वडा समिति गठन गर्ने, ठाउँ ठाउँमा बाटा घाटाहरु मापदण्डअनुसार पु¥याउनलाई सहयोग गर्ने, खास गरि गुण्स्तरीय, वडा स्तरीय कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने र जनताका अफ्ना दैनिक कामहरुमा व्यस्त छौँ ।
हाम्रो ५ नं. वडा इटहरी नगरपालिकामा ठुलो जनंख्या भएको वडा हो । जनघनत्वका अधारमा बाटाघाटा ज्यादै भएको हुँदा खासगरि हामी ती बाटाहरु बनाउने, तिनिहरुलाई पिच गर्ने अथवा ती बाटालाई हिलो मुक्त गर्ने काममा लागेका छौँ ।
तपाईले वडाको विकासको लागि के कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
बाटो नभई अन्य विकास नहुने भएकोले हामीले बाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । जनताको माग पनि बाटोको नै आइरहेको छ । हाम्रो साधनस्रोतले भ्याएसम्म हाम्रो भागमा पर्ने बजेटभन्दा बढी नै नगरपालिकाले हामीलाई माया गरेर दिएको छ ।
वडाका मुख्य समस्याहरु के के छन् ?
वडाका समस्याहरु त धेरै छन् । साधारण बिरामी हुँदा पनि सुइ हान्ने ठाउँ नभएको, विद्यालयहरु पनि त्यस्तै अस्त व्यस्त निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र क्याम्पस पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ ।
हामीले हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्मको र घोषणा पत्रमा भने अनुसारको काम, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत हस्पिटल ल्याएका छौँ । त्यस्तै ज्योति माध्यमिक विद्यालयको द्रुतगतिमा विकासको लागि अगाडी बढाएर लगिरहेका छौँ ।
यस्तै दुवै पक्षबाट सहमति गराएर ज्योति मावि र जनता माविको जग्गालाई एउटै बनाएर संयुक्त खेल मैदान बनाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ ।
त्यसैगरी हामीले वडा कार्यालय बनाउनको लागि पनि यहाँका सर्वदलिय कमिटिलाई बोलाएर छलफल गरिसकेका छौँ । चाँडै नगर परिषदमा यसलाई पास गराएर कार्यालय बनाउन लागि पर्नेछौँ ।
वडाको समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ?
यस वडाको समस्या धेरै भएकाले विकास निर्माणको कुरामा जुनसुकै पार्टीको भएता पनि ५ नं. वडाको विकासमा सबैले सहयोग गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागी हामीले ज्योति मावि भित्र रहेको कृषि भवन केहि महिना अगाडि भत्काएर हटाएका छौ । त्यस स्थानमा ज्योति माविको दुई तले भवन बनिसकेको छ ।
चुनाव अगाडी के के कुराको अश्वासन दिनु भएको थियो र के के कुरा पुरा गर्नु भयो ?
आश्वासन दिएका कुराहरु ५ वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसमा पनि लाग्छ हाम्रो ५ नं. वडामा शसक्त खालको टिम छ । विकास निर्माणमा सदस्य ज्यूहरु पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ । उहाँहरु घरायसि माग भन्दा पनि ५ नं. वाडको विकासमा कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नुभएको छ ।
क्याम्पस र ज्योति माविको विषयलाई हामीले समग्र रुपमा लानेछौँ । चाँडैनै हामीले यो काम सकेर सफलै जस्तो छ अहिले पनि निश्चित रुपमा हुन्छ । त्यसरी नै काव्य वाटीकामा हामीले अस्पताल बनाउने कुरा भएको थियो तर, त्यँहाको जग्गा लाम्चो भयो गोल आकारका भएन बनाउन नमानेपछि अहिले हामीले काव्यबाटीकाको जग्गालाई आयमुलक खालको बनाएर लानुपर्छ भनेर भनेका थियौँ ।
अब बसेको नगरबोर्डले कार्यपालिकालाई के बनाउन सकिन्छ के गर्न सकिन्छ ? यसको अध्ययन पनि हाम्रो इन्जिनियरसँगको संयोजकत्वमा भइरहेको छ ।
तपाईलाई कर्मचारीहरुले कतिको सहयोग गरेका छन् ?
यो बीचमा त बन्द हडताल गरेर विभिन्न माग मागिरहेका थिए । त्यस्तो नभएको समयमा उहाँहरुले पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ ।
वडाको विकासको विषयमा को सँग र के माग राख्नु भएको छ ?
हामीले खासगरी माग गर्नुपर्ने भनेको नगरपालिकै हो । प्रदेशले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेकै छ । हाम्रो घोषणा पत्रमा आएको मदन मार्ग पनि बन्ने क्रममा छ ।
अन्तिममा कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
५ नं. वाडका जनताहरुले काम गर्न लागेका ठाउँहरुमा अवरोध गर्नु भएन । बाटो बनाउनको लागि नगरपालिकाले मापदण्ड बनाएको छ, मापदण्ड अनुसार नै लैजानु पर्छ ।
मापदण्ड अनुसार वर्षेनि बजेट आउँदैन । सहयोग गर्नु भएकोमा ५ नं. वडावासीहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यहि जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्षमा उनीहरुलाई सहयोग ग¥यौँ भने उनीहरुले पनि हाम्रो कामहरु धेरै ठाउँमा सुविधा योग्य बनाएर लैजानुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।
(यसअघिको तस्वीरमा वडा नं. ५ हुनुपर्नेमा वडा नं. ६ भएकोमा सच्याइएको छ ।)